Kofi Annan oo ka hadlay arinta ka taagan Gobolada Sool,Sanaag iyo Cayn.
New York,USA,22 Jan,2004-Ninka madaxda ka ah golaha qaramada midoobay Mr Kofi Annan ayaa ka hadlay colaada beryahaan ka aloosantay gobolada Sool,Sanaag iyo Cayn,colaadaas oo u dhaxaysa maamulada Puntland iyo Somaliland,kuwaasoo mid walbaaba ku dacwiyayo in ay goboladaasi ay maamulkiisa hoos tagaan.
Meelo badan oo ka tirsan gobolada SSC ayaa waxay maamulada Puntland iyo Somaliland soo dhoobeen malayshiyooyin ka amar qaata maamuladaas,kuwaas cabsi iyo welwel ku abuuran dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanadaas. .
Qoraal uu soo saaray Mr Annan oo uu akhriyey ninka afhayeenka u ah oo lagu magacaabo Fred Eckhard ayaa waxa uu yidhi."Madaxa UN-tu Mr Annan waxa uu aad uga xun yahay colaada ay maamulada Puntland iyo Somaliland ka abaabulayaan magaalada Laascaanood,oo ah magaala madaxda gobolka Sool,colaadaas oo ah mid khatar keeni karta,isla markaana ku soo beegantay wakhti uu socdo shir la rabo in soomaalida colaadeedii lagu soo afjaro,hadii dagaalkaasi dhacana soomaalida u horseedi doonta dhibaato cusub".
Qoraalka uu soo saaray Mr Annan ayaa waxa uu ka dalbaday labada maamul ee Puntland iyo Somaliland inay "xaalada dejiyaan,oo ay joojiyaan inay xoog ciidan wax ku xaliyaan"isagoo codsanaya in ay arinta ku dhameeyaan wada hadal.
Colaadan ayaa bilaabatay kadib markii baarlamaanka Somaliland ay ansixiyeen in ay ciidamo u diraan gobolada Sool,Sanaag iyo Cayn,si ay u soo xidhaan xuduudaha Somaliland,kadibna uu maamulka Puntland uu ciidamo keenay magaalada Laascaanood,halkaasna uu ka dhacay iska hor imaad dhexmaray ciidamada Puntland iyo malayshiyo uu soo aruuriyey Wasiirka reer Miyiga ee Somaliland Fu,aad Aadan Cade,taasina ay keentay inay halkaa ka dhacaan dhimasho iyo dhaawac labaduba.
Gobolada Sool,Sanaag iyo Cayn ayaa waxay dhul ahaan dhacaan dhulkii uu gumaysan jirey ingiriisku xiligii gumaysiga,balse midowgii gumaysigii dabadiis,labadii qaybood ee soomaaliya 1 july 1960 ayaa la aasaasay dawlad soomaaliyeed oo la baabi,iyey dhamaan xaduudihii gumaysigu dhex dhigay soomaalida,markii dawladii dhexe ee soomaaliya burburtayna,ee colaada u dhaxaysa qabiilada soomaalidu bilaabatayna,waxaa qof walba tegey meeshii uu ku badbaadi karo oo uu reerkiisu dego,waxaana aasaasmay maamulo ku dhisan hab qabiil oo ay ka mid yihiin Somaliland(Isaaq) iyo Puntland(Harti/Daarood).Dadka dega goboladaas ayaa waxay isku reer yihiin dadka kale ee iyaguna dega gobolada kale ee Puntland.
Mr Annan ayaa ugu baaqay maamuladaasi,inay ilaaliyaan xaqa ay leeyihiin dadka shacabka ah,isla markaana ay xaqiijiyaan in gargaar la gaadhsiiyo dadkaas tabaalaysan,oo aanay hor istaagin caawimada u socota goboladaas.
Wuxuu kaloo Kofi Annan ugu baaqay dhamaan kooxaha soomaalida ah inay heshiis gaadhaan,oo ay ka midho dhaliyaan shirka hada uga socda wadanka Kenya,si loo helo dawlada Soomaaliyeed,loona dhameeyo colaada iyo dhiiga la daadinayo.
Shirka soomaalida uga socda Kenya,oo hada socday mudo Sanad iyo dhowr bilood ah,ayaa la isku mari la yahay,in la sameeyo sharci dadka lagu kala hago,iyo baarlamaan guud iyo weliba ergoyinka shirka ka qayb qaadanaya intay le,ekaan doonaan.
London,UK,21 Jan,2004-Waxaa laga qaadi doonaa faraha dadka ka yimaada 5 wadan oo ku yeela geeska afrika ka hor inta aanay soo gelin UK,sidaas waxaa sheegay wasiirka socdaalka ee UK Beverley Hughes.